Iilwandle ezilungileyo eAthene | Ukuhamba kwe-Absolut
Iilwandle ezilungileyo eAthene
EGrisi iyafana namanxweme, ihlobo, iiholide ezimnandi okanye ukuhamba phakathi kwamabhodlo ezinto zakudala. Into eqhelekileyo kukwazi ukuba ikomkhulu emva koko sitsibe siye kwesinye seziqithi, kodwa ukuba asihlali eAthene nakwimimandla esijikelezileyo kukho neelwandle ezinkulu.
Ke, namhlanje makhe sithethe ngayo iilwandle ezilungileyo eAthene.
1 Iilwandle zaseAthene
2 Iilwandle kunxweme olusemazantsi eAthene
3 Iilwandle ezikumazantsi mpuma eAthene, kufutshane naseSounio
4 Iilwandle ezikumazantsi mpuma eAthene kufutshane neMaraton
IAthene ihlanjwa ngamanzi e Ulwandle iAegean ke sikwafumana iilwandle ezintle kwaye zisondele kakhulu kunelwandle lweziqithi. Ayisiyiyo into yokuba beze kubathabathela indawo, iholide eGrisi iya kuba sisiqhwala ngaphandle kohambo oluya kwiziqithi, kodwa ukuba awunalo ixesha okanye udlula nje kwikomkhulu lamaGrike, ke ezi zilwandle ziya kunika ulwaneliseko.
Inyaniso yeyokuba iilwandle ezikufutshane neAthene zininzi, kwaye kukho izinto ezivela kubunewunewu kwaye zilungelelaniswe kakuhle ukuya kumanxweme amxinwa, ngesanti encinci kwaye bambalwa kakhulu abantu. Ngokufanelekileyo, phonononga kunye Yonke into iya kuxhomekeka kwixesha lamahhala onalo kunye nokuba ungakanani okanye ufuna ukuphuma kwiziko lesixeko.
Ngethamsanqa, ukuba uyazibuza malunga umgangatho wamanzi kufutshane nesixeko esikhulu impendulo kukuba kunjalo kulunge kakhulu, ubuncinci yile nto ithi i-Arhente yokusiNgqongileyo yaseYurophu.
Iilwandle kunxweme olusemazantsi eAthene
Ezi zilwandle bakwelinye icala leAttica kwaye zilungile ukuba awunalo ixesha elininzi okanye awunayo imoto. Kwezi zilwandle zasemazantsi ifikeleleka lula ngeteksi, ibhasi okanye itramu. Masibone, nantsi i-Astir elunxwemeni, intle kakhulu.
La Ulwandle lwase-Astir Ngenye ye iilwandle eziphezulu zeAthene. Kukwindawo entle yaseVouliagmeni kwaye ke inazo zonke iinkonzo. Ndiyathetha, unako ukuqesha iibhedi zelanga, iiambrela kwaye ukonwabele nokunxibelelana WiFi. Kwaye ukuthengiswa kokutya nokusela akusweleki nako. Ewe, ayilulo ulwandle oluncinci kwaye kuya kufuneka uhlawule ukungena: I-25 euro ngeveki, i-40 euro ngeempelaveki, ngomntu omdala.
Ewe, ixabiso liphezulu kwaye ngeempelaveki ngexesha labantu baninzi, kwaye mhlawumbi ibhedi yelanga okanye isambrela asifumaneki. Ungabhukisha kwangaphambili, ewe, kodwa kusenzima. Ulwandle lwase-Astir kufanelekile ukuba ungathanda ukubona kwaye ube phakathi kwabantu abahle kunye nabahle. Ivula ngo-8 kusasa kwaye ivala ngo-9 ebusuku, kodwa ukuba uhlala isidlo sangokuhlwa kwindawo yokutyela ungahlala kude kube phakathi kobusuku.
Olunye unxweme lolwandle Unxweme lwaseKavouri, kwindawo efanayo yaseVouliagmeni. Elunxwemeni yisingasiqithi enemithi yemithi yepayini kunye nezindlu ezibizayo. Kukho iziqwenga zesanti kwaye uyakwazi ukudada, nangona elona candelo lidumileyo yiMegalo Kavouri, kwintshona ekude, ineambrela kunye neebhedi zelanga zokurhola kodwa neendawo ezikhululekileyo.
I-Kavouri Beach isanti yegolide kwaye inamanzi azolileyo angena elwandle. Ukufika apho akukho nzima kuba unako Thatha i-metro ukuya kwisikhululo se-Elliniko kwaye ukusuka apho ibhasi ye-122. Ngethamsanqa ikwanentengiso yokutya neziselo.
El IChibi iVouliagmeni Yindlela engaqhelekanga yokwakheka komhlaba ecaleni kolwandle kwaye inonxweme. Amanzi anetyuwaZiza ngaphantsi kweentaba ngaphaya kwentaba, kwaye elunxwemeni kukho iibhedi zelanga kunye neambrela. Inqanaba lamanzi kufutshane nonxweme alinzulu, kodwa kwelinye icala linobunzulu obungaziwa, ke lumka. Njengoko ilichibi ngokubanzi amanzi ashushu kancinci kunolwandle ngaphakathi Ixesha lifumana ukuthandwa.
Unezinto ezininzi onokuzisebenzisa, kukho indlela ibha yolwandle ilunge kakhulu, ivulwe imini yonke, amagumbi okutshintsha, iishawari, ukufikelela kwisitulo esinamavili kunye nendawo yokutyela Xa ilanga litshona kancinci kwaye liyaphola, umculo uqala ukudlala. Ngokubanzi, lulwandle oluzolileyo kunolo lolwandle.
Ukuba uthanda ukudada elwandle ulwandle lwakho ke Ulwandle lwaseThalassea. Kukwahlomela-dolophu laseVoula, emazantsi eAthene, kwaye ineenkonzo ezininzi. Unokurenta isitulo kunye nesambrela ngamaxabiso amahle kwaye ehlotyeni kuhlala kukho amaqela kunye neemvumi ezidumileyo.
Ngeentsuku zeveki uhlawula umrhumo wokungena we-5 euros entloko kunye ne-6 ngeempelaveki. Ungafika apho ngezithuthi zikawonke-wonke, nokuba ungahamba nge-metro kwaye wehle kwisikhululo se-Elliniko emva koko uthathe ibhasi engu-122 okanye uthathe i-tram kwisiphelo sayo yi-Asklipio Voulas.
La Ulwandle lwaseYabanaki Ime kwindawo yaseVarkiza kwaye yenza uhlobo lwe Imboniso yepaki kuba ibonelela ngaphezulu konxweme nje. Kukho ukutya okukhawulezayo, ikofu, iziselo, ukutya kwaselwandle, ukutya kwesiGrike ngokufanayo kwaye unokuziqhelanisa imidlalo emininzi yamanzi, ukusuka kwisikhephe sebhanana esimnandi ukuya emanzini, ukubethwa ngumoya okanye ukubhexa ngephedi.
Ukusukela ngoMvulo ukuya ngolwesiHlanu umrhumo wokungena yi-5 euro kodwa ireyithi ibandakanya indawo yokuphumla yelanga kunye nesambrela. NgeMigqibelo nangeeCawe ukungena yi-euro ezingama-6 kodwa kuya kufuneka ubhatale enye i-euro eyisi-5 ngeambrela, ngaphandle kokuba ungene emva kwentsimbi yesi-7 yasimahla.
Ufika njani elunxwemeni? Ungaphinda uthathe i-metro kwakhona uye kwisikhululo se-Ellinko kwaye ukusuka apho ibhasi 171 okanye 122.
Ngakolunye uhlangothi, Unxweme lwase-Edem lolona lusondeleyo eAthene, phakathi kwezithili zeAlimos kunye nePalio Faliro. Lunxweme olulungelelanisiweyo, ngebhodi yokuhamba abantu bahamba-hamba kwaye bakusa kwezinye iilwandle ezincinci ezimbini, ibhodi enkulu yechess kunye neenkonzo ezahlukeneyo. Kulula ukufika apho ngetram, ukwehla kwisikhululo segama elifanayo.
Iilwandle ezikumazantsi mpuma eAthene, kufutshane naseSounio
Eyona ndawo isemazantsi peninsula iAttica yiSounio, apho intle khona Itempile kaPoseidon, ithandwa kakhulu ngeeyure zangokuhlwa. Kodwa ude ufike apho, kwiikhilomitha ezingama-35 zonxweme, kukho iilwandle ezininzi. Ewe ngokunjalo, ufuna imoto ukuze ufike kubo.
La ulwandle lwesounio Ineembono ezintle kwitempile edumileyo, lulwandle oluhleliweyo kwaye ineenkonzo ezininzi. Kukho kwakhona amacandelo oluntu kunye nasimahla. Amanzi acacile kwaye kufanelekile ukuqhuba iyure enye ukufika apha. Ewe ulumke ngexesha kuba kwixesha eliphezulu lasehlotyeni kunzima ukupaka kwicandelo elikhethekileyo lemoto. Emva koko, kukho iindawo zokutyela apho ungatya khona intlanzi kunye nokutya kwaselwandle.
La Ulwandle lwaseKape Intle kwaye ine umbono omangalisayo weAegean. Umgangatho wolwandle wenziwe ngamatye amancinci amancinci kunye namanzi acwengileyo. Ewe bakhawuleza bafumane ubunzulu ukuze wazi ukudada. Njengokuba olu lwandle lufumene udumo kwiminyaka yakutshanje, kuhlala kukho abantu abaninzi ngeMigqibelo nangeeCawa. Ungathenga ukutya neziselo apha? Kukho inkantini, kodwa ayisoloko ivulekile ukuze ufune ukuzisa izinto zakho.
Kwaye okokugqibela, ukuba uyathanda ukuhamba ze uze uhambe kancinci uyakufika kolunye ulwandle, oluncinci, kulapho lwenziwa khona. ubunqunu.
La Unxweme lwaseAsimakis Ayaziwa njengangaphambili, kodwa ukuba ufuna ukuphonononga itempile ngaphandle kokuhlala kumanxweme akufutshane nayo, nolu khetho. Ayidla ngokuba nabaphulaphuli abaninzi, kunjalo indlela eya eLavrio esuka eSounio, kwaye inesanti eninzi. Ewe ngokunjalo, akukho maambrelaKe ukuba awunayo ayinokukulungela.
I-Asimakis Beach inendawo yokutyela kwaye iyure enye ukusuka eAthene.
Iilwandle ezikumazantsi mpuma eAthene kufutshane neMaraton
Eli lelinye iqela lamabhishi akumazantsi mpuma eAthene kananjalo Kuyimfuneko ukuba nemoto kuba ngaloo ndlela ufika ngokukhawuleza nangokulula. Idabi elidumileyo leMarathon lenzelwe apha, ukuze udibanise imbali kunye nokuzonwabisa.
Unxweme lokuqala kuluhlu lolu Ulwandle lweSchinias, kakhulu, ibanzi kakhulu, kanye ekupheleni komgxobhozo okhuselekileyo kunye nehlathi lepine, ziikhilomitha nje ezi-3 ukusuka kwingcwaba laseMaratón. Ukuqubha apha kulungile kwaye kukho ezinye iitavern ezikufutshane.
Ulwandle inamalungu acwangciswe ngakumbi kunamanye, Ke unokukhetha ukuba kunye nabantu abaninzi okanye abangaphantsi. Ayifikeleleki lula ngezithuthi zikawonke-wonke kwaye ngemoto ithatha imizuzu engama-50.
La Ulwandle lwaseDikastika lolunye ukhetho ukuba ufuna enye into reclusive kwaye ayithandwa kakhulu. Kulungile ecaleni kolwandle lweSchini kunye ayinasanti, kodwa sinamatye. Yindawo entle yokufikela, enezindlu ezintle ezikufutshane kwigama elifanayo, kodwa kunjalo, ayinazambrela kwaye ukungqengqa kunokuba yinto engathandekiyo ...
Ewe, ukuza kuthi ga ngoku ezinye zezona zilwandle zibalaseleyo eAthene, kodwa kunjalo ayizizo zodwa. Singaxela igama elithi Iilwandle zaseLagonissi, iVarkiza, iGlyfada, iAkanthus, iLegrena, iFlisvos, iYabanaki, iKrabo, iNiriides okanye ii-coves ezintle zaseLimanakia.
Ukonwabela Iilwandle zaseAthene hlala ukhumbula ukuba uhlala njalo bambalwa abantu ngeentsuku zeveki, into njengabakhenkethi esinokuthi siyisebenzise kakuhle, ukuba iflegi yeorenji ithetha ukuba kukho oonogada bezempilo ngamaxesha athile kuphela kwaye iflegi ebomvu ithetha ukuba akukho namnye, ukuba kumanxweme ane-marina kuhlala kukho iipaseji emanzini iindadi kunye namaphenyane Kulumkele oko, kwaye phakathi kukaJulayi nango-Agasti kukho imimoya enamandla ukuze kubekho imisinga enamandla.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhamba kwe-Absolut » Iilwandle ezilungileyo eAthene
Iimyuziyam ezilungileyo ze-wax eMelika